Manchester United oo Kooxda Liverpool kula tartamaysa saxiixa laacib khadka dhexe ka ciyaara – Gool FM
Manchester United oo Kooxda Liverpool kula tartamaysa saxiixa laacib khadka dhexe ka ciyaara
(Manchester) 20 Abril 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa lagu soo warramayaa inay qorsheynayso inay xagaagan u dhaqaaqdo laacibka khadka dhexe ee naadiga Bayer Leverkusen ee Kai Havertz, kaasoo sidoo kale bartilmaameed u ah Liverpool.
20-sano ayaa 20 gool u dhaliyey kooxdiisa Leverkusen tartammada oo dhan intii lagu guda jiray kal ciyaareedkii 2018-19, markale ayuuna xilli ciyaareedkan qaab ciyaareed sare soo bandhigay, isagoo dhaliyay 10 gool, isla markaana diiwaangeliyay siddeed caawin 34 kulan oo uu saftay.
Liverpool ayaa weli sii wadata xiriirka ay la sameynayso ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Jarmalka, kaasoo dhawaan shaaca ka qaaday inuu diyaar u yahay inuu qaado tallaabo weyn oo mustaqbalkiisa ah, isagoo si maldahan u sheegay bixitaankiisa xagaagan.
Si kastaba ha noqotee, sida ay warinayso Jariiradda Evening Standard Man United ayaa ku dartay Havertz liiskooda xagaaga, iyadoo kooxda 20-ka goor hanatay horyaalka Ingiriiska ay raadineyso hal abuur badan oo khadkeeda dhexe ah.
Da’yarkaan oo sidoo kale si xooggan loola xiriiriyay kooxda Bayern Munich ayaa arki doona qandaraaskiisa haatan ee garoonka BayArena oo dhacaya xagaaga 2022-ka.
Red Devils ayaa la sheegay inay u aqoonsatay Jack Grealish inuu yahay bartilmaameedka koowaad ka hor ololaha 2020-21, laakiin warbixin dhowaan soo baxday ayaa sheegeysa in kooxda aysan haatan si firfircoon uga daba-dhaqaaqin kabtanka Kooxda Aston Villa.
"Waxaan u haystay in Adduunka uu ku eg yahay 2000, sidaas darteed ayaan isaga diiday Kooxda Man United!"
Miyuu damacsan yahay N'Golo Kante inuu ka tago Kooxda Chelsea, xilli ay xiiseynayaan Real Madrid iyo Barcelona?